One famous journalist အဘ ဥက္ကာ ကိုကို wrote >>>
လက်ပံတန်း မြင်ကွင်းကျယ်>>>ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ရဲကို ပါးရိုက်ပလိုက်တယ်
ရဲဖက်က ကျောင်းသားတချို့ကို ဖမ်းရိုက်တယ်
အမိန့်မပေးဘဲ ရဲတွေ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲလိုက်ရိုက်တယ်
အထက်အရာရှိတွေ တားမြစ်သံကို ရဲတွေရုတ်တရက် မနာခံခဲ့ကြဘူး
XXX ရဲတွေဖက်က အင်အားများတယ်..
ကျောင်းသားတွေ ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးရတယ်
မီဒီယာတွေ အုတ်တံတိုင်းကျော်သူကျော်… ပြေးသူပြေး… လဲသူလဲ …
ရဲတွေ ကျောင်းသားတွေနောက်ကို ပြေးလိုက်တယ်…
ရိုက်တယ် … ဖမ်းတယ်.. ဆွဲတယ်
ရိုက်ကွာ.. နှက်ကွာအသံတွေ ကျယ်လာတယ်
XXXX စိတ်မထိန်းနိုင်သေးတဲ့ ရဲတွေက
တုတ်နဲ့ တွေ့ရာပစ္စည်းကို ရိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ်
သတင်းယူနေတဲ့ ဘေးက မီဒီယာသမားတချို့ကို
ရဲတစ်စုက အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းပြီး လိုက်ရိုက်တယ်
ရဲအရာရှိအငယ်ရော အကြီးတွေရော အော်ဟစ်တားမြစ်တယ်..
မရိုက်ဖို့ ပြောတယ်… မရတော့ဘူး။ XXX- ဥက္ကာကိုကို –
Ko Ko Gyi >>>လက်ပံတန်းကျောင်းသားသပိတ်ဖြို ခွဲမှုကို အသေးစိတ်ပြန်ပြောပြထားတဲ့ဆောင်းပါးပါ။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ ရှင်ဒေ၀ီရေးသားပါတယ်။>>>
၁ နာရီခွဲ ရေသန့်ဗူးတစ်လုံးပျံဝဲသွားတယ်။ တလုံးထဲနော်။ ကျောင်းသားအုပ်စုထဲကပေါက်ကွဲ လိုက်တာလို့ယူဆရပါတယ်။ တချိန်ထဲ ကျောင်းသားဘက်ကိုနံပတ်တုတ် တစ်ခုပျံဝဲလာ။ ကျောင်းသားက မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကောက်ယူပြေး။ ရဲကပြန်လု၊ ရုန်ရင်းဆန်ခတ် အဲဒီအချိန်မှာ အချင်း ၄လက်မ လောက်ရှိတဲ့ ခဲတွေ ရဲတွေဘက်ကနေ သပိတ်အုပ်စုဘက်ရောက်လာ။ အရမ်းမြန်တယ်။ စပြီ။ ဒီမှာ ကမ္ဘာပျက်ပြီ။ အရိုက်အဖွဲ့ပြေးဝင်ရိုက်ပြီ။ သူတို့က တွန်းနေတဲ့ရဲတံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး ။ လည်ပတ်နီတွေ နဲ့ ။ တပ်မ ၁၁ တဲ့။ စစ်ဦးဘီလူး။
ကျမ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ မီဒီယာ ကော်နာ ကိုကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးပြေးကြပြီ။ ခဲတွေ က အဆက်မပြတ်။ နောက်က လည်စီးနီ နဲ့ဒုတ်တွေနဲ့ဝင်လာပြီးတလကြမ်းရိုက်တော့တာပါဘဲ။
XXXX အပြင်က ၅ ပေအကွာမှာကမ္ဘာပျက်နေ။ ကျမ ဘာမှမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာမှမကူညီနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်။ အမှန်ကိုပြောမယ်။ ကျောင်းသားတွေ ကိုကာကွယ် ပေးချင်တဲ့ရဲတွေအမှန်ရှိခဲ့တယ်။ ရဲအချင်းချင်း ပြသနာတကယ်တတ်ခဲ့တယ်။ လူနာတင်ကား ကိုရိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ ရဲမှူးတားပေးခဲ့တယ်။ ကဗျာဆရာသော်ဇင်အုန်းတို့ကိုလဲ လူစိတ်ရှိတဲ့ နယ်မြေခံရဲ ကကူညီခဲ့တယ်လို့ကြားခဲ့ရတယ်။
ယုတ်မာတာထက် ဆိုးရွားတဲ့ အကြမ်းဖက် ရဲဝတ်တွေရှိခဲ့တယ်။ ရိုက်တယ်။ ရိုက်တယ်။ ဒေါသတကြီး၊ အငြိုးတကြီး၊ မရပ်မနား၊ မြင်မြင်ရာ အဲဒီလို ရိုက်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ ၀င်နေတဲ့အိမ်တွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီး အားလုံးကိုရိုက်တယ်။ ဖျက်ဆီးတယ်။
This entry was posted on March 12, 2015 at 9:17 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
လွတ်မြောက်လာသည့် သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ) @ http://burmese.dvb.no/archives/85303 By ဒီဗွီဘီ
March 12, 2015 at 11:28 am | Reply